The Irrawaddy's Blog: ငါးမင်းဆွေနောက်မှာ ဘယ်သူတွေလဲ
(25)ရက်နေ့ မနက်တွင် ရွှေဂုံတိုင်ရှိအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှေ့သို့ နအဖ၏ အာဘော်များကို အထူးရေးသားပေးနေသော (ငါးမင်းဆွေ) ဆိုသူ ရောက်ရှိလာပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံလိုကြောင်း အော်ဟစ်ဆန္ဒပြခဲ့သည်။ ၄င်း (ငါးမင်းဆွေ) ရေးသားခဲ့သော မော်နီတာ ဂျာနယ်ပါ ဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းပြောကြားလိုကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့် အနောက်နိုင်ငံများမှ စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့ထားမှုအား ဖယ်ရှားပေးစေလိုကြောင်း အော်ဟစ်တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။
ငါးမင်းဆွေအား အမျိုးသားဒီမိုကရေစီရုံးရှေ့သို့ လာရောက်ရန်အတွက် ဖုန်းဆက်ခေါ်ဆိုခဲ့သူမှာ လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်မှ နအဖဖော်လံဖား မြတ်ခိုင်၏ သား ဇေယျာမြတ်ခိုင် ဖြစ်ပါသည်။ ငါးမင်းဆွေသည် အဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှေ့ ထောက်လှမ်းရေးများထိုင်သော လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် ကြိုတင်ရောက်ရှိနေပြီး မော်နီတာဂျာနယ်၊ လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်မှ ဇေယျာမြတ်ခိုင်မှ ဖုန်းဖြင့် (အကိုလာလို့ရပြီ၊ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ) ဟု ပြော၍ လှမ်းခေါ်လိုက်ရာ ငါးမင်းဆွေရောက်လာပြီး ၄င်း၏ ဆောင်းပါးမိတ္တူများ တပွေ့တပိုက်နှင့် စတင်အော်ဟစ်ဆန္ဒပြပါတော့သည်။
ငါးမင်းဆွေမှ ၄င်းရေးသားခဲ့သော ဆောင်းပါးမိတ္တူများကို ပြည်တွင်းဂျာနယ်မှ ဂျာနယ်လစ်များနှင့် လူအချို့အား လိုက်လံဝေငှခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနမှ သတင်းထောက်တစ်ဦးမှ ထိုမိတ္တူဆောင်းပါးကို တောင်းရာ ပြည်ပနိုင်ငံခြားသတင်းဌာနမှဆိုရင် မပေးနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ အကြောင်းစုံအား ဆက်လက်စုံစမ်းရာ ငါးမင်းဆွေ ရေးသားသော ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်တွင် ဒေါ်စုကြည်ဟု သုံးနှုံးထားသည်ကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်များက မကျေနပ်ကြကြောင်း၊ ပြည်သူများမှလည်း မကျေနပ်ကြကြောင်း သိရပါသည်။အဲ့ဒီနောက် ငါးမင်းဆွေအား အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ် ရုံးအဖွဲ့မှုး ဦးဝင်းထိန်မှ တွေ့ဆုံရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။ ဦးဝင်းထိန်မှ ဒေါ်စုကြည်ဆိုသည့် အသုံးအနှုံးအား ပြောင်းလဲရေးသားရန်၊ ၄င်းတို့ အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်အား ယင်းကဲ့သို့ ခေါ်ဆိုခြင်းကို လုံးဝ လက်မခံနိုင်ကြောင်း၊ နအဖစစ်အစိုးရအကြိုက်ရေးသားနေသောသူနှင့် ၄င်းတို့၏ ခေါင်းဆောင်အား ပေးမတွေ့နိုင်ကြောင်း၊ ဦးဝင်းထိန်မှ ၄င်းထောင်ကျနေစဉ်အတွင်း ငါးမင်းဆွေ ရေးသားသော ဆောင်းပါးများတွင် နအဖကောင်းကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မကောင်းကြောင်းများ လုပ်ကြံရေးသားထားသည်ကို ဖတ်ရကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးဝင်းထိန်နှင့် ငါးမင်းဆွေတို့ တွေ့ဆုံရှင်းလင်းနေကြသည်ကို မြတ်ခိုင်၏ သား ဇေယျာမြတ်ခိုင်နှင့် လျှပ်တပြက်အဖွဲ့သားများမှ ဗီဒီယိုနှင့်ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများ ရိုက်ယူနေသည်ကို တွေ့ခဲ့ရပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့် တစ်ပတ်မှ စတင်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဓါတ်ပုံနှင့် သတင်းများကို ထည့်သွင်းရေးသားဖော်ပြခဲ့သည့်ဂျာနယ်များ အပိတ်ခံရအပြီးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သတင်းကို လာရောက်မှတ်တမ်းယူသော ပြည်တွင်းဂျာနယ်လစ်များ မတွေ့ရတော့ပေ။ သို့သော် လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်မှ ဇေယျာမြတ်ခိုင်နှင့် ၄င်း၏အဖွဲ့သားများကတော့ ဆက်လက်လာရောက် သတင်းယူနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
အကြောင်းအရင်းကို စုံစမ်းကြည့်ရာ သူရဦးရွှေမန်း (ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း) မှ ထောက်လှမ်းရေးနှင့် သတင်းတပ်ဖွဲ့မှ ရဲထောက်လှမ်းရေးများအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတင်းယူခြင်း၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်း လုပ်ရမည် သို့ သော် အနှောင့်အယှက်မပေးရဟု ညွှန်ကြားပြောဆိုထားသောကြောင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်သတင်းယူ၍ မရသောကြောင့် မြတ်ခိုင်နှင့် သူ့သား ဇေယျာမြတ်ခိုင်တို့အဖွဲ့အား ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးကျော်ဆန်းမှ ငွေကြေးနှင့် အခွင့်အရေးများပေး၍ ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းသတင်းများ ယူခိုင်းထားကြောင်းသိရပါသည်။
မြတ်ခိုင် အယ်ဒီတာချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူထုတ်ဝေနေသော မော်နီတာဂျာနယ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဓါတ်ပုံကို ကြီးမားစွာ မျက်နှာဖုံးအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း ထုတ်ဝေမှု ယာယီရပ်ဆိုင်းခံရသော ဂျာနယ် ၉ စောင်တွင် မပါဝင်ခဲ့ပေ။ သို့သော် လူအများပြောဆိုစရာဖြစ်မည်ဆိုသဖြင့် ၄င်း၏ ဂျာနယ်တစ်စောင်ဖြစ်သော လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်ကို ထုတ်ဝေမှု ယာယီရပ်ဆိုင်းခံရသည်ဟု သတင်းလွှင့်ခဲ့ပါသည်။
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ရေးသားသော (ဘာလဲဟဲ့ လူ့ငရဲ) စာအုပ်ပါ ထောင်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများအကြောင်း ရေးသားထားသည်ကို တန်ပြန်သောအားဖြင့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးကျော်ဆန်းမှ မြတ်ခိုင်အား ၄င်း၏ဂျာနယ်တွင် မြန်မာပြည်မှ ထောင်များမှာ လွန်စွာကောင်းကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ စေတနာရှိမှုကြောင့် ထောင်ကျအကျဉ်းသားများမှာ ကောင်းမွန်စွာနေရကြောင်း ရေးသားခိုင်းမှုကို အလွန်အကျွံ ကူညီရေးသားပေးခဲ့သော ဂျာနယ်လစ်ဆိုးတစ်ယောက် ဖြစ်ပါသောကြောင့် မြတ်ခိုင်နှင့် သူ၏အဖွဲ့သားများ၊ ငါးမင်းဆွေတို့ကဲ့သို့သောသူများအား သတိကြီးမားစွာနှင့် ရှောင်ရှားကြပါလို့ အသိ ပေးတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဖလောင်း မင်းဆွေ တင် ဘယ်ကမလဲ။
ကျီးစေတမန် ထဲ က မင်းချင်းတို့၊မိချမ်းမြ တ်ို .၊တုတ်ကြီး တို့ ၊ပြည်ချစ် တို့လဲ-- မနာလိုဝန်တို မစ္ဆရိယ စိတ် ကို အခြေပြုပီး-- တောရမ်းမယ်ဘွဲ့ တွေ လျှောက်ရေးကုန်ပီ။
ဘုန်းကြီးကျော်ဟိန်း တောင် ဆွဲ ထည့် ထားသေးသဗျ။
လွတ်လပ်စွာသော်၎င်း၊ အော့နှလုံးနာ ရွံရှာစွာသော်၎င်း--ရီမောလို ပါက ၊(အချိန်မနှမျောရင်) သွားဖတ်တော်မူကြကုန်။ ဟီးဟီး။
သြော်--ညံ့ယိုင်(၊မြတ်ခိုင်) ညံ့ တုန်း၊ ယိုင်တုန်းဘဲကိုး။
ဒီကောင်ကိုသတိထားပါ။ဒုတိယ ယက်ထော်(Yettaw) မဖြစ်ဘူးဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူး။
ငါးမင်းဆွေ ဆိုတဲ့လူကတော့ကွာ .. ဘယ်လိုကြည့်ကြည့် ပုံမလာဘူး
သူကိုယ်တိုင် အမြန်ဆုံး အခြေအနေမှန်ကို သုံးသပ်နိုင်ပါစေ
အမှန်တရား said... :
ဒေါ်စုကြည်ဆို တာ သူ့နာမည်မဟုတ်ဘူးလား ။သူ့ကို အဲလို မခေါ်လို့ ဘယ်လို ခေါ်ရမတုန်း။ ဖွားစုကြည်၊ ဒါမှ မဟုတ် မစုကြည်လို့ခေါ်ရမလား။
အန်အယ်ဒီကလည်း လုပ်ပီ..ဒီမိုကရေစီ အော်နေပီး အာဏာကစရူးနေပီ..။ဒေါ်စုကြည်က ခု ဘာမှ မဟုတ်သေးဘူးလေ။ဒါလေးကို တော့ မမေ့ကြနဲ့ဥိး။ဒီမို ကရေစီအော်နေပီး ဒီမို မဆန်တော့ ကြည့်မကောင်းလှဘူး။
နောက်တခု ဒေါ်စု အနေနဲ့လည်း မှန်တယ်ထင်ရင် ဒဲ့ရှင်းသင့်တယ်။ဒါမှ လည်း ဒီမိုပီသမှာပေါ့။ဒေါ်စု ဒီကိစ္စကို မရှင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဒေါ်စုကို အကြံပေးလိုက်ပါဥိးဗျာ။ ရှေ့ဆက်ဖို့ ခက်မယ်နော် လို့..။
နဲနဲမှ ကျက်သရေ မရှိတဲ့ရုပ် ... ထွီ
only one who take the action of hero in front of NDL office,butadog.
ငါးမင်းဆွေလား ငါခြောက်မင်းဆွေလား ဒီလူရေးတဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ရင် သူ့စိတ်ဓာတ် ကိုသိနိုင်ပါတယ် သူရေးတဲ့ဆောင်းပါးတိုင်းသာဖတ်မိရင် မိတ်ဆွေတို့ ခေါင်းရိုက်ခွဲချင်စိတ်ပါပေါက်သွားမယ်။ စစ်ဖား မြွေပွေး။ အဲလူကိုသတိထားရမယ်။
မြတ်ခိုင် ဆိုတဲ့ကောင်ကို ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ မဟေသီ စာအုပ်တွေထဲမှာ ကတည်းက ကြားဘူးတာ ဘာမှအရည်အချင်းရှိတာမဟုတ်ဘူး ဟုတ်တိပတ်တိနား လည်တာမဟုတ်ဘူး ဟိတ်ဟန်နဲ့ စာပေသမားယောင် စောင်နေတဲ့ကောင် ခွေးမသား လယ်ကူလီကုလားမျိုး
မြင်ယောင်သေးတယ် ဒီလိုဥပဓိရုပ်နဲ့ ပေါက်ကရတွေ ရေးတဲ့..နွားမင်းဆွေ..(၈၈)တုန်းကလိုမျိုး အရေးခင်းထဖြစ်ရင် ပထမဆုံး တွေ့ရမယ့် ခေါင်းပြတ်ကတော့ နွား(မင်းဆွေ) ခေါင်းပြတ်ပဲ့..။
၇ုပ်ကိုက ကောက်ကျစ်မူအပေါင်း သ၇ဖူဆောင်းမဲ.၇ုပ် ၊ အလိုတော်၇ိ၇ုပ်၊ အော.နှလုံးနာလိုက်တာ။
တစ်ခါတစ်လေကျတော့လဲ လူတစ်ယောက်ရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်တဲ့ အတုိုင်း ပြောဆုိုလုပ်ကုိုင်မှုဟာ တစ်ခြားလူတွေကုို တော်တော် ခံရခက်စေတယ်ဆုိုတာ ဒီအဖြစ်မှာ မြင်ရပါတယ်.. အထူးသဖြင့် မိမိသဘောထားကုို မိမိဘာသာ လွတ်လပ်စွာ ဖော်ထုတ်ခြင်းဆုိုတာကို နားလည်ပေးဖုို့ အသားမကျတဲ့ လူတွေဆိုတော့လဲ တုန့်ပြန်မှုဟာ နင်ပဲငဆနုိုင်လှတာ မဆန်းပါဘူး..
ပြည်သူကို အသိပညာပေးနေသော စာရေးဆရာပုံတဲ့ ။ သေချာကြည့်ပါ။
သတင်းစာမ ဖတ်ဖြစ်တာ ၁၀ နှစ် ကျော်ပြီဗျာ။ဖတ်တုန်းကလဲ နောက်ကနေတရွက် နှစ်ရွတ် ပဲဖတ်တာ နာရေး သတင်း သိချင်လို့။သတင်းစာ စောင်းပါးဆိုတာဘယ်သူမှမဖတ်တာ သိရဲ့သားနဲ့အမေစု လို လူထု ခေါင်းစောင် ကို ဖတ်ဖို့တဲ့တော်တော် ရူး တဲ့သောက်ရူးပဲ။ ခုဖားမင်းဆွေ ဆိုတာ တနှပ်စား သမား ပါ။ အရပ်ခေါ် ဆိုရင်တော့ ချီးထုပ် ပေါ့ဗျာ။
္န္နနွားမင်းဆွေ အဲလေယောင်လို့ ငါးမင်းဆွေ တဲ့ လား၊ ဥပဓိရုပ် ခန့် ညားမှုကတော့ဦးသန်းရွှေနဲ့ နင်လားငါလားဘဲ၊ မြှောက်ပေးလို့ ကတော့ ခွေးတောင်ပြန်ကိုက်မယ့် ရုပ်၊
ကိုထင်ကျော်တို့ ကျောက်မြောင်းဈေးအရှေ့မှာထင်တယ် ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အမှုတွဲကို မှတ်မိသေးလားတော့မသိဘူး။ အဲ့ဒီတုန်းက ၈၈ အယောင်ဆောင် ဒေါင်းယောင်ဆောင်သောလဒ အေးလွင်တို့တတွေက အခုလိုပဲ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့လို့ ဘာညာဆိုပြီး အရင်ဆန္ဒပြတော့ ကိုထင်ကျော်တို့ကလဲ သူတို့တောင် ဆန္ဒပြသေးတာ ငါတို့လဲဘာလို့ ပြလို့မရမှာလဲဆိုပြီး ဆန္ဒပြကြတာလေ။ အခုလဲ ငဖားက နောက်တကောင်ပေါ်လာပြန်ပြီ။ အခု ငဖားက ဆူဆူပူပူ ဗြူးဗြူးဗြဲဗြဲတွေလုပ်တာတောင် NLD နဲ့ အန်ကယ် ဦးဝင်းထိန်တို့က လူအသိစိတ်မရှိတဲ့ ဒီလို ငဖားကို လူလူသူသူ ဆက်ဆံလိုက်သေးတယ်။ မယုံရင် စစ်အစိုးရကို ခဏဖယ်ထားပြီး ဦးပိုင်တို့ တေဇတို့ အိမ်ရှေ့မှာ ခဏသွားရပ် ဆန္ဒပြကြည့်ပါလား။ ဘဘဦးအုန်းသန်းတို့ တွံတေးက ကျူရှင်ဆရာ ဦးအောင်ဖေ တို့ သက်သေပဲ။ ဒီ ငဖားဟာ ဖွတ်အောက်ဆွဲဆိုတာ ပြောစရာတောင်မလိုဘူး။ မသတီဖို့တောင်ကောင်းတယ်။ ဒီလိုလူမျိုး တုတ်နဲ့ရိုက်သတ်ဖို့တောင် မလိုဘူး။ မယုံရင် မကျေနပ်တဲ့သူတွေ တံတွေးနဲ့ လာထွေးကြပါဆိုပြီး ထွေးခိုင်းကြည့် တံတွေးမွန်းသေသွားမယ်။
ဟိတ်ကောင်....မြတ်ခိုင်.. မင်းအကြောင်းတွေ ငါဖော်လိုက်ရမလား?? မင်းဟော်တယ်သွားသွားပြီးတော့ စော်လေးတွေ ၀ိုက်နေတာ.. မြန်မာပြည်က ကောင်မလေးတွေလဲကုန်တော့မယ်.. မင်းရဲ့ တပည့်ကျော်ကြီးကတော့ ငုတ်တုတ်လေးစောင့်လို့ပေ့ါ.. ဒီလောက်ဆို မင်းသဘောပေါက်ပါတယ်နော်...မင်းဒီထက်ဆိုးလာရင်တော့.......
ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက်ကနေ အစုံဖက်နေရပါတယ် တကယ်လို့ ဒီသတင်းမှားတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ခေါင်းဆောင် အန်တီအောင်ဆန်းစုကြည် အနေနှင့်အမြန်ဆုံး လူသိရှင်ကြားပြန်ရှင်းပေးစေလိုပါတယ်... အဲ့တာမှအင်တာနက်မှာအော်နေတာတွေကို ပြန်ပြောလို့ရမှာ
ငါးမင်းဆွေ ဆိုပြီးဆောင်းပါးရေးတာ သူတောင်မဟုတ်လောက်ဘုးထင်တယ်..ရုပ်ကိုကြည့်ရတာ။ ဒီကောင်က အသုံးချခံ နလပိန်းတုံးလူယုတ်မာရုပ်ကြီးပါ။ သူတို့ထက်ပိုယုတ်မာတဲ့ကောင်တွေအကွက်ချပြီး စီစဉ်တာဖြစ်နိုင်တယ်။
အောက်ကရေတွက်ရင်(၃)ခုမြောက်က comment ရေးတဲ့တိရစ္ဆာန် (Anonymous, November 26, 2010 9:38 PM) သို့.....
မင်းလည်း ဖားမင်းဆွေလို တိရစ္ဆာန်ပဲလား?
မင်းနဲ့ ဖားတစ်ပိုင်း ငါးတစ်ပိုင်း မင်းဆွေနဲ့ အမျိုးလို့ထင်တယ်။
concerned for DASSK said... :
Ngha Min Swe co shauh ma twet par neh, SPDC bah
say twey tite hta mhan ma thi bu, click paste
on recent Yettaw news, especially SPDC is letting
DASSK move and speak freely, FBI should investigate Yettaw's financial standing since
his return from Burma. SPDC might be plotting
to use Ngha Min Swe to make Yettaw's prediction
come true. Yettaw got away with his crime and
Min Swe will too, DASSK is in imminent danger.
တိရစ္ဆာန် (Anonymous, November 26,2010 9:38 PM)သို့.....
ဖားတစ်ပိုင်း ငါးတစ်ပိုင်း မင်းဆွေနဲ့အမျိုးတော်တယ်ထင်တယ်။
".....တစ်ခါတစ်လေကျတော့လဲ လူတစ်ယောက်ရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်တဲ့ အတုိုင်း ပြောဆုိုလုပ်ကုိုင်မှုဟာ တစ်ခြားလူတွေကုို တော်တော် ခံရခက်စေတယ်ဆုိုတာ ဒီအဖြစ်မှာ မြင်ရပါတယ်.. အထူးသဖြင့် မိမိသဘောထားကုို မိမိဘာသာ လွတ်လပ်စွာ ဖော်ထုတ်ခြင်းဆုိုတာကို နားလည်ပေးဖုို့ အသားမကျတဲ့ လူတွေဆိုတော့လဲ တုန့်ပြန်မှုဟာ နင်ပဲငဆနုိုင်လှတာ မဆန်းပါဘူး....."
မင်းလည်း တိရစ္ဆာန်မင်းဆွေနဲ့ အတူတူပဲ....။
စောက်ရူး( ကန်တော့ပါရဲ့ ) ကောင် အကြောင်းကိုများ အားအားရားရား
ခင်ဗျားတို့မို့ ဖော်ပြနေတာ သောက်ခွက်ကို ကြည့်ပါလား ဥပဓိရုပ်က
ကျနော် ဖင်ကို သနပ်ခါးလိမ်း ထားတာကမှ ကြည့်လို့ ကောင်းအုံးမယ်
** ရင့်သီး ကြမ်းတမ်းခဲ့ရင် သည်းခံ ခွင့်လွတ်ပါခင်ဗျား ***
" ဒီကောင်ကိုသတိထားပါ။ဒုတိယ ယက်ထော်(Yettaw) မဖြစ်ဘူးဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူး။
Agreed. Keep Daw Suu security tightly. Don't let idiots like him enter to NLD office. Don't mind & behave them as equal as humans due to their dirty.
အဲဒီ ရူးကြောင်ကြောင် ရုပ်ကြမ်း ဖေါ်လံဖါး ငါး ကြီးကို အကြောင်းပြုပြီး သန်းရွှေ အောင်သောင်းတို့ က တခုခု လုပ်ဘို့ ကြံစည်နေတာ သေချာတယ်။ နောက်ကွယ်မှာ ကျော်ဆန်းက ကြိုးကိုင် ၊ အမြီးကျက် အမြီးစား ခေါင်းကျက် ခေါင်းစား မြတ်ခိုင် က ဒါရိုက်တာ၊ သူ့ သားက ကြိုးဆွဲ ကားလိပ်တင်ပေးပြီး အဲဒီ ကျက်သရေတုံး ပြည်သူ အချစ်တော်ကို ပွဲထုတ်လာတယ်။ NLD အဖွဲ့သားတွေ အတွင်းစည်း အပြင်စည်း တွေ အားလုံး သတိရှိဘို့ ပြောပါရစေ။
နအဖ စစ်အုပ်စု ရဲ့ ဝါဒဖြန့် ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင် တွေထဲမှာ ဒီ တယောက် အကြောင်ဆုံး အရူးဆုံး ပဲ။ ကြမ်းတမ်း လိုက်တဲ့ ရုပ် ကလဲ ဘီလူး က အဘ ခေါ်ရမယ်။ သူ့ရေးတဲ့စါ ဆောင်းပါး တွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ဘို့ NLD ရုံးမှာ လာပြီး ဆန္ဒပြတယ် ဆိုကတဲက အဖြစ်အပျက်က တကဲ့ယုတ္တိ နဲ့ ကင်းကွာနေတယ်။ သူရေးတာ လူဖတ်စေချင်လွန်းလို့ စစ်အုပ်စုရဲ့ သတင်းစာ မှာ မကြာမကြာပါနေတာပဲ။ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဒီလို ရူးကြောင်ကြောင် ဖြစ်လာတာကို ပေါ့တီးပေါ့ဆ မထား မတွေးသင့်ကြောင်း အကြံပြုလိုပါတယ်။
ငါးမင်းဆွေဆိုတဲ့ကောင် ကခွေးလေခွေးလွင့်လောက်တောင်တန်ဖိုးမရှိဘူး၊၊ ဓာတ်ပုံမှာ ငါးမင်းဆွေ NLD ရုံးထဲ ၀င်လာပုံက ခွေးတကောင်ရုံးထဲ ၀င်လာ တဲ့အတိုင်းပဲ။ အဲလိုခွေးမျိုး ရုံးထဲအ၀င်မခံခိုင်းပါနဲ့။
ခွေးတွေဆို အဲဒီလိုပါပဲ ။သခင်ကြည်ဖြူအောင် ဟောင်ရတယ်လေ။
ခွေးဟောင်တိုင်း ထကြည့်ရင် အိပ်ရေးပျက်မှာ ။အမေစု တို့က ဘယ်ကလာပြီးအိပ်ရေးအပျက်ခံမလဲ ဒီလိုခွေးမျိုး ကြောင့်။
သူ့ဘိုးအေတွေ နိုင်ငံရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကို အလွဲသုံးစား လုပ်နေတာကိုကျတော့ ဟိုလိုလုပ်ပေးပါ ပြည်သူတွေအတွက်၊ ဒီလိုလုပ်ပေးပါလျင် လက်တွဲပါမည် ဆိုပြီး အသံကောင်းမဟစ်ရဲပါလား။ အေးပေါ့လေ ဟိုက အင်းစိန်ထဲ ဆွဲစိထားလိုက်မှာတော့ ဖင်တုန်အောင် ကြောက်လှချည် ထင်ပါရဲ့။
ုkk.aung said... :
အော် ငဖားမင်းဆွေရယ် ဖားရလွန်းလို ဖားရုပ်တောင်ပေါက်နေတယ်
ဖားမင်းဆွေဆိုသူသည် စာရေးဆရာပုံတော့ မပေါက်ဘူး။ ပေစုတ်စုတ်နွားကျောင်းသားပုံပဲပေါက် နေတယ်ဗျ။ မြန်မာစစ်အစိုးရ အသက်ရှည်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းတွေထဲမှာ အဲဒီလို လူမျိုးတွေကြောင့်လည်းပါနေတယ်။ အနားနီးလို့ကတော့လား ဘုန်းဘုန်းနဲ့တွေ့လိုက်ချင်ပါသေးတယ်ဗျာ။
ဒီကောင်ဖားမင်းဆွေတို့ ဖာမြတ်လိုင်တို့ က ငစိမ်းသည်ကျော်ဆန်းရဲ့ လက်ကိုင်တုပ်လုပ်နေတာလေဘယ်သာကဘယ်သူကိုချနေတာလဲတော့ မသိဘူး။မြတ်ခိုင်ရောမင်းဆွေရောအချောင်၇မဲ့ အခွင့် အရေမျိုးဆိုသမီးတောင်ဖာဖြစ်အောင်ထောင်စားမဲ့ ကောင်တွေအာဏာရူးအချောင်သမားတွေစောက်ဆင့် စောက်တန်းမှမရှိတာ ရုပ်ကိုကြည့် ပါလား
တိုင်ပြည်ကိုတကယ် ဖျက်နေတာက ...အနုပညာကိုခုတုံးလုပ် န၀တ စိတ်တိုင်ကျ ရေးခြင်ရာရေး ပြောခြင်ရာပြောနေသူတွေ..
န၀တ ကဦးနောက်မရှိဘူ ...ဒီလိုကောင်တွေမြှောက်ပေးတာတွေကိုလိုက်လုပ်နေတာ
ထမင်စားရဘို့ (သိုမဟုတ်) တဘ၀စာလေးနှင့် ပြည်သူတွေ ဒုတ္ခေ၇ာက်အောင်လုတ်နေကြတာ..
ဒီလို သာအဖ ကို ပထမ သပိတ်မှောက်ရမယ် ( သူတိုဂျာနယ် မ၀ယ်နဲ မဖတ်နဲ )
ဖနောင့်နဲ့ပေါက်ချင်သူ said... :
ှိုီိဒီကောင့်နံမည်ကိုအရင်ဆောင်းပါးတွေထဲကကြားဘူးနေတာ။ အဲဒီထဲကဒီကောင်ုကိုမမြင်ဘူးပေမဲ့ဒီလောက်အောက်တန်းကျတဲ့အရေးအသားတွေရေးနေတဲ့ကောင်ရဲ့ဥပဓိရုပ်ကတော့တော်တော်ဆိုးရှာမှာပဲလို့တွေးထင်ထားတာ၊ အခုမျက်နှာမြင်လိုက်ရတော့မှပဲ၊ မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေ၊ အသံကြားသနားပါစေဆိုတဲ့အဆိုကိုလုံးဝဆန့် ကျင်ပြီး၊ ဆောင်းပါးဖတ်ရတဲ့အချိန်ထဲကဖနောင့်နဲ့ ပေါက်ချင်နေတာ၊ မျက်နှာလည်းမြင်လိုက်ရောဖနောင့်နဲ့ တောင်မတန်မှန်းသိလိုက်ရတယ်။ ရုပ်ကသန်းရ္မေရဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်မြောက်တိတ်တိတ်ပုံးမိန်းမနဲ့ ရတဲ့သားလဲမသိဘူး၊ မသေခင်ကပုပ်နေတဲ့မျက်နှာကသန်းရ္မေအတိုင်းပဲ။
I totally agreed ....ဖနောင့်နဲ့ပေါက်ချင်သူ said...
ပြောချင်ရာ ပြောကြာပါတော့ သဘောကဖြင့် အတူတူပါပဲ----------- ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အားလုံးကတော့ ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ လက်ဖ၀ါးပါပဲ-----ဒါပေမဲ့ အားလုံးက အတူတူပါပဲ
ဖားတို့၊ ငါးတို့၊ နွားတို့နဲ့ မနှုင်းကြပါနဲ့ ဗျာ။ သူတို့က တရိစ္ဆာန် ဆိုပေမယ့် လူသားတွေကို အကျိုးပြုပါတယ်။ မင်းဆွေဆိုတဲ့ကောင်က နာမည်ရှေ့မှာ "ဦး" တပ်ဖို့ မကောင်းပါဘူး။ "ရူး" တပ်ရင်တောင် အရူးသိက္ခာကျပါတယ်။
ငါးမင်းဆွေ ဖားမြတ်ခိုင် တို့ဥပဓိရုပ်တွေကို ကြည့်ကြစမ်းပါ ကျက်သရေမရှိတဲ့ရုပ်တွေ သူတို့ သောက်ဆင့်လောက်နဲ့ များ ပြည့်သူ့ အမေ ကိုသွား တွေ့ ချင်နေရသေးတယ် လူဆိုတာကိုယ့်အဆင့်ကိုယ်သိရတယ် နွားနှစ်ကောင်ရ ပြောမဲ့ တာပြောရတာ နွားသိက္ခာကျတယ်ကွာ
There have never been any right in Myanmar to freely express what one believes, not even in the peaceful way. The fact that this man was freely able to shout infront of the party office is not what the member of the public would be allowed to do infront of any of SPDC office. Let alone to callalady ( Aunty Su) with all the names under the sun as he wrote in all of his articles in SPDC news paper. You know in your heart that this is not called freedom for people in Myanmar.This is an act allowed to only those so-called people who are looking forward to the bones threw to them from SPDC and generals. I suppose you are one of the member of SPDC and I know for sure that you all don't have any believes in doing what you have to do now. There is only one hope in all of you is that " I will get to his (Than Shwe's) place one day or somewhere near so that I can do business,my wife can wear diamonds, my save got thousands of money..and so on..". That is all you all are hoping for.
With Reference To:"""တစ်ခါတစ်လေကျတော့လဲ လူတစ်ယောက်ရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်တဲ့ အတုိုင်း ပြောဆုိုလုပ်ကုိုင်မှုဟာ တစ်ခြားလူတွေကုို တော်တော် ခံရခက်စေတယ်ဆုိုတာ ဒီအဖြစ်မှာ မြင်ရပါတယ်.. အထူးသဖြင့် မိမိသဘောထားကုို မိမိဘာသာ လွတ်လပ်စွာ ဖော်ထုတ်ခြင်းဆုိုတာကို နားလည်ပေးဖုို့ အသားမကျတဲ့ လူတွေဆိုတော့လဲ တုန့်ပြန်မှုဟာ နင်ပဲငဆနုိုင်လှတာ မဆန်းပါဘူး.."""
နအဖ မကောင်းကြောင်းပဲပြော တိုင်းပြည်အတွက် အနှစ် ၂၀ ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်သေးတဲ့ NLD ။ ဟ ဟ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင် လုပ်ရမှာပဲ။
ကိုယ်ပဲမှန် သူများတွေ အကုန်မှားနေတယ်လို့ ယူဆနေတယ်ထင်တယ်။
Well, I have read so many articles written by him n I dont have many words to talk about that.
The most important thing is we need to monitor what kind of strategies they are planning to do. This is the first step n they may have another shows. So, pls be alert the Security of Aunty very carefully.
I am notasingle cent related to NLD.So there is no point for me to defend whether NLD can do or can not do. BUT, what you are saying is something like blaiming the person whose four limbs are tied for not being able to cross the river. It has been over 60 years after the army ruled the country and even with the normal public eyes, we can see what Army has done for our country blessed with natural resources but cursed with the greediness of your army generals. We all can guess that how many dollars SPDC is earning every year from selling off all the natural resources yet the country becomes the poorest in the region. We are not blaiming SPDC without any reason...if you could just open one eye, see and reason with your brain , you could be able to see what is right and wrong. Tell me if you have seen someone in SPDC working sincerely for the country, not for the authority. We are not blaming anyone. We are just asking for the change, after stupid 60+ years under military ruling.
With Reference to: "နအဖ မကောင်းကြောင်းပဲပြော တိုင်းပြည်အတွက် အနှစ် ၂၀ ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်သေးတဲ့ NLD ။ ဟ ဟ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင် လုပ်ရမှာပဲ။
မျှမျှတတ ပေါ့ "
အောက် ကလူသို. :
မျှမျှတတ ပေါ့ “
အနှစ် ၂၀ လုံးလုံး NLD ကလူတွေကိုထောင်ထဲထည်. NLDမိသားစုဝင်တွေ ရဲ.စီးပွားရေးတွေကိုလည်း ရှိသမျှ ကလိန်ကကျစ်ဥာဏ်တွေသုံးပြီး အောက်လမ်းနည်းတွေနဲ. ဖျက်ဆီး၊ NLD ကိုထောက်ခံတဲ. သူတွေကိုလည်း ဒုက်ခမျိုးစုံ တွေပေးနေ ပြီး မျှမျှတတ လို.ပြောထွက်ရဲတဲ. အနှီပုဂိုလ်ရဲ. အရှက်တရားကင်းမဲ.မှု.ကို အံ.မခန်း ဖြစ်ရပါကြောင်း။
မြန်မာပြည်မှာ ဒီလို အဆင်.အတန်းမရှိ အရှက်မရှိ၊ ဂုဏ်သိက်ခါမရှိ၊ ကိုယ်ကျင်.တရားမရှိ တဲ. ပုဂိုလ်တွေ ရှိနေသေးသရွေ. တိုးတက်ဖို.အလှမ်းဝေးနေဦးမှာပါဘဲ။
အရှက်တရား ရှိနိုင် ကြပါစေ။
၀င်းဝင်း(စလုံး) said... :
ငါးမင်းဆွေ ကျားမင်းဆွေ ဖားမင်းဆွေ နွားမင်းဆွေ ၀က်သားမင်းဆွေ ကြက်သားမင်းဆွေ တိရီစ္ဆာန်မင်းဆွေ
အပေါ်ဆုံးကရေရင်တော့4ခုမြောက်(အမှန်တရား)command သို့......
ဒေါ်စုနံမည်အပြည့်အစုံက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လေ. ရှေ့က အောင်ဆန်း ဆိုတဲ့နံမည်ပါဖို့အတွက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်မှပါ. လူတစ်ယောက်ရဲ့နံမည်ကိုတောင် အလေးအနက်မထားနိုင်တဲ့ ဟိုအရူးကိုစာရင်းထဲထည့်နေရင် ဘာအလုပ်မှကိုလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး....
Don't compare him n his partners with animals, bcoz all kind of animals is simple and they doing their nature. But min swe is doing foolish things.
နအဖ ဖက်ကရပ်တည်ပြီးရေး နေတဲ့ကောင် မင်းဟာ နအဖ ရဲ့ ပြည်သူဆိုတာ မင်းဖြစ်ရမယ်..
လောကမှာ ထမင်းအတူတူ စားကြပေမဲ့ အတွေးအခေါ် ဘာကြောင့်ကွဲ နေလည်း စဉ်းစား စရာပဲ။ လူတစ်ထောင် က မှားပါတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို လူတစ်ယောက်ထဲ ကမှားတယ်ပြောတာ အဲလူ ထူးချွှန်နေလို့ မပာုတ်ပါဘူး လူလောက် စဉ်းစားတတ်တဲ့ စဉ်းစားဥာဏ်မရှိလို့ ပါ။ အနောက်အုပ်စုက စီးပွားရေး ပိတ်ထားလို့ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး ပျက်တယ်လို့ ပြောရအောင် သန်းရွှေသမီး မင်္ဂလာဆောင်တုံးက စိန်တွေ ဘယ်ကရသလဲ?နေပြည်တော်ကြီး ကို ဘယ်ကပိုက်ဆံ နဲ့ ဆောက်သလဲ? တိုင်းပြည်ကြီး မှောင်နေပြီး ဓာတ်ငွေ့ တွေကိ်ု လိုက်ရောင်းထားတဲ့ ပိုက်ဆံ ဘယ်ရောက်သွားသလဲ? တိုင်းပြည်ကို နှစ်နှစ်ဆယ် အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ပြီး ရေ မီးကို မှန်အောင် မပေးနိုင်တဲ့ အစိုးရ ငါ့ တ်ု့ ပြည်သူတွေ အလိုမရှိဘူး? NLD စဖွဲ့ စည်းကတည်းက တိုင်းပြည်အတွက် ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး ပာုတ်ပြီ နအဖ ကရောဘာလုပ်ခဲ့သလဲ? TV သတင်းထဲက လို တံတားတွေဆောက် လမ်းတွေပြင် လာမပြောနဲ့ နယ်မှာကြီးခဲ့တာ ကိုယ့်အားကိုယ့်ကိုး လမ်းတွေက များတယ်။ တခြားမြို့ တွေ မပြောဘူး ရန်ကုန်မြို့ ကြီး မီးမှန်အောင် ပေးနိုင်ပြီလား? စက်မူဆုံ ကစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုသွားမေးကြည့် မီးမှန်အောင်ပေးနိုင်ရင် ထုတ်ကုန် ဘယ်နှစ်စ တိုးထုတ်နိုင်ပြီး ဈေးနှုန်း ဘယ်လောက်ရော့ပြီး ရောင်းနိုင်မလဲလို့ ?အရှင်းဆုံးပြောလိုက်မယ် နအဖ ဘက်တော်သားများသို့မင်းတို့ အားပေးတဲ့ အစိုးရကို ငါတို့ နှစ် နှစ်ဆယ်ပေးအုပ်ချုပ်ပြီးပြီ မင်းတို့ အစိုးရ အလုပ်လုပ်ခဲ့ရင် ငါတို့ လည်း နှစ်နှစ်ဆယ် နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ကျနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ငါတို့ မေ့နေလောက်ပြီ။ မင်းတို့ အစိုးရ ပြည်သူ့ ချစ်သောအစိုးရဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ အခွင့်အရေး အများကြီးရခဲ့ပါတယ် သူတို့ စားဖို့ ကလွဲပြီင်္း တိုင်းပြည်အတွက် ဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ စစ်တပ်ဆိုတာ အခြင်းခြင်းအဝေမတည့်ရင်တောင် ထောင်တွင်းထားတဲ့မျိုး ဗိုလ်ခင်ညွန့် သာကြည့်တော့ နွားမင်းဆွေရေ မင်းလောက်တော့ သူများခိုင်းလို့ ဝရင် လမ်းဘေးမြောင်းကြားမှာ ခိုပါရစေတောင် နေရာပေးပါ မပာုတ်ပါဘူး...
ခင်ဗျား ရုပ်ကြည့်မှပဲ ဪ လူယုတ်မာဆိုတာ ဒီလိုရုပ်ရည်မျိုးကိုးလို့ သဘောပေါက်တော့တယ်
အူတူတူကြောင်တောင်တောင် ဂေါက်တောက်တောက် အရေးအသားတွေနဲ့ ခင်ဗျားရဲ့အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ အရူးချေးပန်းဆောင်းပါးတွေကို ကျုပ်တို့ လူထုခေါင်းဆောင်မပြောနဲ့ လမ်းဘေးက အရက်သမားတောင်မဖတ်ဘူး
ဒီ Comments ကို တင်ဖြစ်အောင်တင်ပေးစေလိုပါတယ်....
တကယ်ကိုစကားလုံးရှာမရတော့လို့ပါ ..... ကျွန်တော်စာကောင်းကောင်းတတ်ပါတယ် ဆယ်တန်းမှာ မြန်မာစာ၊ သတ္တမတန်းမှာ အဘိဓမ္မာ ဂုဏ်ထူးမှတ်ကျော်ပြီး အောင်ထားသူပါ၊ ဒါပေမယ့် ဒီငဖားမင်းဆွေနဲ့ သူ့ကိုထောက်ခံ Comments ပေးတဲ့သူတွေကို တစ်ချက်လောက်တော့ နာနာတီးချင်ပါတယ် ဒါကြောင့် ဒီ Comments ကို ထည့်ဖြစ်အောင် ထည့်ပေးစေလိုပါတယ် .....
ငဖားမင်းဆွေကို ထောက်ခံသူများ လူစကား လူ့တန်ဖိုး မြန်မာအမျိုးကို မင်းတို့လို အယုတ်ဖြစ်အောင် မလုပ်ကြနဲ့ဟေ့ ...
I like this Min Swe. He isahero.